स्थानीय तहमा झन्डै १३ हजार दरबन्दी खाली, के गर्दैछ सरकार ?
काठमाडौँ, १२ भदौ । संघीयताको बहस र अभ्यासमा गएको लामो समय भइसके पनि नेपालमा यसको कार्यान्वयन जटिल बन्दै गइरहेको छ । स्थानीय सरकार गठन भएको २ वर्षभन्दा बढी समय बितिसके पनि अधिकांश स्थानीय तहमा अहिलेसम्म आवश्यक कर्मचारी पुग्न सकेका छैनन् ।
प्रतिफलमा सेवाग्राहीले आवश्यक सुविधा समयमै पाउन सकेका छैनन् । प्रदेश सरकारले पनि विकास निर्माणको काम अघि बढ्न नसक्नुको प्रमुख कारण कर्मचारी अभाव भएको प्रतिक्रिया दिँदै आएको छ ।
बाजुराको हिमाली गाउँपालिकामा १७ जना कर्मचारीको दरबन्दी भए पनि ३ जना कर्मचारीले काम चलाइरहेका छन् । ताप्लेजुङको मैवाखोला गाउँपालिकामा पनि कर्मचारी समस्या उस्तै रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश अधिकारीको गुनासो छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार अहिले स्थानीय तहमा झन्डै १३ हजार दरबन्दी खाली छ । कर्मचारी समायोजनको काम भइरहेकाले प्रदेशहरूमा अहिले कति कर्मचारीको अभाव छ ? एकीन तथ्याङ्क छैन ।
यो वर्षभित्र सबै तहमा कर्मचारीको समस्या समाधान भइसक्ने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उप सचिव जीवलाल भुषाल दावी गर्छन् । लोकसेवाले लिएको परीक्षाबाट स्थानीय तहमा ९ हजार कर्मचारीको पदपूर्ति हुनेछ ।
एक त केन्द्रबाट स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी जान मानिरहेका छैनन्, गएका कर्मचारीलाई पनि कतिपय ठाउँबाट फिर्ता पठाइएको छ । लोकसेवाले लिएको परीक्षाबाट स्थानीय तहमा ९ हजार कर्मचारीको पदपूर्ति हुने जनाएको छ । अरु कर्मचारीको पनि विज्ञापन खोल्ने तयारी गर्दै गर्दा खटाइएको ठाउँमा कर्मचारी नजानुको कारण, सरकारको निर्देशनको पालना नहुनुको रहस्य खोतलिएको छैन ।